व्यापार युद्धको कारण भण्डारमै कुहिँदैछ अन्न | गृहपृष्ठ
Home अन्तरराष्ट्रिय व्यापार युद्धको कारण भण्डारमै कुहिँदैछ अन्न
on: ५ मंसिर २०७५, बुधबार १७:२५ अन्तरराष्ट्रिय
व्यापार युद्धको कारण भण्डारमै कुहिँदैछ अन्न
भण्डारण लागत पनि बढ्यो
मङ्सिर ५, वाशिङटन डीसी (अमेरिका) । अमेरिका-चीनबीच जारी व्यापार युद्धको असर विस्तारै अमेरिकामा देखिन थालेको छ । अन्न भित्र्याउने बेला सकिएको छ । अमेरिकी कृषकहरुलाई अन्न भित्र्याउने र कसरी भण्डारण गर्ने भन्ने कुराले टाउको दुःखाएको छ । चिनियाँ क्रेताले किन्ने गरेका कृषि उपजहरु व्यापार युद्धका कारण चीन जाने स्थिति छैन । यस्तोमा मकै, भट्मासलगायत अन्नहरुको कहाँ र कसरी भण्डार गर्ने भन्ने समस्या त छँदैछ । भित्रयाएको जति अधिकांश अन्न नबिकेर थन्किएपछि भण्डारणको लागत पनि बढेको छ ।
केही किसानहरुले भने दिक्क भएर अन्न नभित्र्याइकन खेतबारीमै सड्न छाडेका छन् । ‘अन्न कोही पनि किन्न चाँहदैनन्, अब के गर्ने हो मलाई थाहा छैन,’ लुइजियानाका किसान रिचर्ड फोन्टेनटले भने । स्थिति थोग्न नसकेपछि फोन्टेनटले ३ लाख डलरभन्दा बढी मूल्यका भट्मास भित्र्याउनुको सट्टा खेतमै जोतिदिए । यस्तो समस्या भोग्ने फोन्टेनट एक मात्र किसान भने होइन । अहिले अमेरिकाभर अन्न कृषकहरुले यस्तै गरिरहेका छन् ।
बजारमा अत्यधिक आपूर्तिका कारण अन्नको मूल्य घटेको छ । यस्तोमा कसै कसैले भने आगामी वर्ष राम्रो भाउ पाइने आशामा जमिनमै अन्न थुपारेर राखेका छन् । तर ती उपर्युक्त भण्डारणका अभावमा ती अन्नहरु पनि कुहिँदैछन् । लुइजियानामा १५ प्रतिशत तेलहन अन्न कि खेतमै जोतेर नष्ट गरिएको छ, भित्रिएका अन्नहरु पनि बजारमा लानै नमिल्ने गरी क्षतिग्रस्त भएका छन् । मिसिसिपी, अर्कन्सास, इलिनोइज, इण्डियानालगायत कयौं राज्यमा यस्तै स्थिति छ ।
चिनियाँ माग बढ्ने आशामा यस वर्ष अमेरिकी किसानहरुले ८ करोड ९१ लख एकड जमिनमा भट्मास लगाएका थिए । तर अमेरिकी अतिरिक्त महसुलको प्रतिकार गर्दै चीनले अमेरिकाबाट आयातित भट्मासमा २५ प्रतिशतको अतिरिक्त महसुल लगायो । यसले चीनतर्फ अमेरिकी भट्मास निर्यात ठप्प भयो । चीनले अमेरिकी आपूर्तिको करीब ६० प्रतिशत जति भट्मास किन्दै आएको थियो ।
गत वर्ष भने अमेरिकाबाट चीनतर्फ १२ अर्ब डलरको भट्मास निर्यात भएको थियो । किसानहरुलाई व्यापार युद्धको मारबाट जोगाउन अमेरिका सरकारले १२ अर्ब डलर बराबरको सहायत कार्यक्रम पनि ल्याएको थियो । तर यो कार्यक्रम अहिले अपर्याप्त र अप्रभावकारी देखिएको छ । एजेन्सी
अमेरिका-चीन व्यापार युद्धः सम्झौताका लागि समयसीमा लम्ब्याउँदै ट्रम्प
१ फाल्गुन २०७५, बुधबार १८:२७
न्यु बिजनेश एज प्रा. लि . पाञ्चायन मार्ग , थापाथली काठमाडौँ, नेपाल सम्पर्क : ०१-४२६७७१७ , ४२६७६५२ फ्याक्स : ०१ -४२६८७२६ इमेल : [email protected]